ဇင်ဘာဘွေ စစ်သားတို့က ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြသူတို့ကို တမင်ရည်ရွယ်၍ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်မှုပြုနေသည် ဟု?? - Yangon Media Group
ဇင်ဘာဘွေ စစ်သားတို့က ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြသူတို့ကို တမင်ရည်ရွယ်၍ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်မှုပြုနေသည် ဟု??
အစိုးရကခန့်အပ်ထားသော လူ့အခွင့်အရေးအုပ်စုက စစ်သားများသည် ဆန္ဒပြသူများကို ချေမှုန်းရာတွင် စနစ်တကျ တမင်သက်သက် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သည့်နည်းကို အသုံးပြုလျက်ရှိကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့ကြသည်။ ဇင်ဘာဘွေ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကမူ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူတို့ကို ချေမှုန်းရာတွင် စစ်သားများကို အသုံးပြုနေမှုအတွက် ဇင်ဘာဘွေအာဏာပိုင်တို့ကို ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့သည်။
ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံတွင် လောင်စာဆီ ဈေးနှုန်း သိသိသာသာမြင့်တက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း လွန်ခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်ကျော်ကတည်းက မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သတင်းမီဒီယာတို့၏ ဖော်ပြချက်အရ မြို့တော်ဟာရာရီ၏ နေရာအနှံ့အပြားတွင် ဇင်ဘာဘွေစစ်တပ်က ဆန္ဒပြသူတို့ကို ချေမှုန်း လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူတို့ထဲမှ တစ်ဦး၏ အဆိုအရ သူအပါအဝင် လူပေါင်း ၃ဝ ခန့်အား စစ်သားများက ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ကာ ရိုက်နှက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံတွင် အကြမ်းဖက်တိုက် ခိုက်မှုများ ဆက်လက်မြင့်တက်နေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မတ အမ်နန်ဂါဂဝါက စစ်တပ်အပေါ် ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထပ်မံ မေးခွန်းထုတ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဟွာဝေးအလုပ်အမှုဆောင် အကြီးအကဲအား လွှဲပြောင်းယူရေး ဆက်လက်ကြိုးပမ်း
ပြည်သူကို ဗဟိုပြုသော အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်ဆီသို့
မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု “စံ”သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့၏ Competency ရေးဆွဲပြီးသော အလုပ်အကိုင်များတွင် ရက်ကန်း၊ သစ်၊ ဝါးထည်နှင့် ယွန်းအလုပ်အကိုင်များ ပါဝင်
ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များပါဝင်မည့် မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မည်
ပြည်ပဈေးကွက် ရှိလာ၍ ရေနံချောင်းမြို့ထွက် ကြက်သွန်နီအသေးများ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်